इसीमाना सम्वाददाता बीरगंज ४ असोज २०७७ 199 पटक पढिएको
ब्यस्थापन समितिले प्रमाण लोप गर्न थालेकोले काम रोक्न आफूहरु बाध्य भएको स्थानीय नागरिक अगुवा बृजकिशोर पटेलले बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक संजालमा यही जनाकारी सहितको दृश्य समाग्री पोष्ट गरेर जानकारी दिनु भएको हो ।
बहुदरमाई नगरपालिकाको रामनगरीमा रहेको देवनन्दन देवराज नमुना माध्यामिक बिद्यालय रामनगरीमा नमूना बिद्यालय निर्माणकालागि संघ सरकारले नगरपालिका मार्फत १ करोड ५० लाख रुपैया पठाएको छ । नमुना बिद्यालयको नमुना भवन बनाउनु पर्नेमा त्यत्रो रकमको लगानीमा निकै कमजोर खालको भवन बनेको स्थानीयको आरोप छ ।
भवन निर्माणको क्रममा लाखौ रुपैयाको भ्रष्टचार भएको स्थानीय नागरिकको आरोप छ । नमुना बिद्यालयको भौतीक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले बिनियोजन गरेको रकममा भ्रष्टाचार मात्र भाको छैन । बिद्यालयको भवन पनि कमसल खालाको निर्माण गरिएको छ ।
बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति र बिद्यालयका प्राधानाध्यापक यो अनियमिततमा संलग्न रहेको स्थानीयको आरोप छ । बिद्यालयमा भएको चारकोठे भवन भत्काएर त्यही ठाउमा नयाँ भवन बनाइएको छ । बिद्यालयको पुरानो भवन भत्काउदा पनि स्थानीय निकाय संचालन ऐनले गरेको ब्यवस्थाको बर्खिलाप गरिएको छ ।
बिद्यालयमा भवन निर्माणकालागि पर्याप्त जग्गा हुदा हुदै चारकोठा भत्काइएको हो । बिद्यालय निर्माणको नक्सा डिजाइन समेत सार्वजनीक नगरि काम गरिएको छ । भवनको फाण्उडेशन बनाउदा २ मिटर गहिरो बनाउनु पर्ने र बोल्डर सोलिङ गरेर ३ इन्च ढलान गर्ने उल्लेख छ ।
चार सुताको डण्डीको झाली बनाएर ७ फिट लामो र चौडा ढलान पछि ८ वटा २० एमएमको डण्डी प्रयोग गरेर पिलर उठाउनु पर्नेमा १६ एमएमको डण्डी प्रयोग गरिएको छ । फाण्उडेशनको डिजाइन अनुसारको काम समेत भएको छैन । अण्डरग्राउण्ड बिममा पनि डण्डीको प्रयोग कम गरिएको छ । ४ वटा रड हालेर माथिको बिम ढलान गरिएको छ । जसमा १६ एमएमको रडक हाल्नु पर्ने थियो ।
पाँच सुता रड छतमा पुग्दा काटेर दोश्रो तल्लामा ६ सुताको रड २० एमएमको प्रयोग गरिएको छ । इट्टा उधोगले २ नम्बर भनेर बर्गिकरण गरेको इट्टा निर्माणमा प्रयोग गरिएको छ । पुरानो भवनमा प्रयोग भएको झ्याल ढोकाको बिल नयाँ भवनमा समावेश गरिएको छ ।
आठ वटा पिलर तलबाट काटेर ठाउ सारिएको छ । जसले गर्दा पिलर निकै कमजोर रहेको छ । भर्याङ बिमसंग जोडिनु पर्नेमा त्यो भएको छैन । सेलिङको प्लास्टर नहाली पोटिन लगाएर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन ।
भूई ढलान गर्दा डिजाइनमा ६ इन्च बोल्डर सोयलिङ हुनु पर्नेमा साढे २ इन्च मात्रे रुाखिएको छ । ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका ज्वाईको बारामा रहेको इट्टा उधोगबाट ४६ हजार दुई नम्बरको इट्ट मगाएका छन ।
१ करोड ५० लाखमा ६ कोठा निर्माणकोलागि सरकारले नगरपालिका मार्फत उपलब्ध गराएको छ । सामान खर्च भएको छैन तर बिल बिद्यालयको नाममा काटिएको छ । ४० लाख बाट बनेको अर्को भवनको खर्च नयाँ भवनमा पनि समावेश गरेर भ्रष्टाचार गरिएको छ ।
बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिले लेखापाल प्रमोद पंडितलाई स्थायी नियुक्ति दिएको छ । ब्यवस्थापन समितिलाई स्थायी नियुक्ति दिने अधिकार छैन । शिक्षक नियुक्तिमा समेत अनेकौ अनियमतिता भएको छ । नगरपालिकाले बिद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिको बिषयलाई रोक्का गरेको भएपनि नगरपालिकाको निर्णयलाई नमानेर शिक्षक समेत नियुक्ति गरिएको छ ।
बिद्यालयले खरिद गरेको समान जिन्सीमा छैन तर बिलमा भएको स्थानीय नागरिक अगुवा बृजकिशोर पटेलले बताउनु भयो । बिभिन्न दाताले दिएको कम्युटर समेत बिद्यालयमा दाखिला गरिएको छैन । ८ वटा कम्पुटर बिद्यालयले प्राप्त गरेकोमा बिद्यालय प्रशासनले ६ वटामा कम्युटर मात्र बुझेको देखाएका छन ।
बिद्यालयको भवन निर्माण टेण्डरबाट भएको हो की ? उपभोक्ता समितिले बनाएको हो ? भन्ने कुराको यकिन छैन । यो बिषयमा स्थानीयले सबै निकायमा गुहार गरेपनि सुनवाई नभएको बताइएको छ ।